Unonkala wolwandle: iimpawu, indawo yokuhlala, ukutya kunye nosongelo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | abanye, Intlanzi
Kanye njengokuba kukho i-crayfish, ikwakhona oononkala olwandle. Ezi oononkala ziinkwenkwezi zeli nqaku. Zimalunga nama-4000 iindidi esinokuthi ziinkalankala kwaye uninzi lwazo zihlala elwandle. Aba oononkala baneempawu ezahlukileyo kwezo zihlala emlanjeni kuba kufuneka zivumelane nolunye uhlobo lwendalo.
Kule nqaku siza kukuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga nononkala baselwandle.
2 Ukutya kwe-crab yolwandle
4 Izoyikiso zolwandle
Nokuba zivela kwisakhelo somlambo, oononkala ngawoku-odolwa kwee-decapods. Oku kuthetha ukuba zinamacala amabini emilenze. Kwelinye icala, sinemilenze efakwe kwisisu sayo eye yavela kuyo yonke imbali. ukuba zizipleyisi okanye iipleyisi. Ngakolunye uhlangothi sineminye imilenze yemoto.
Unonkala wolwandle uneempawu ezithile ezahlukileyo ngokuxhomekeke kuhlobo, njengokukwazi ukutshintsha ubungakanani namandla alo ngokunxulumene nobukhulu beenzipho zawo. Umsebenzi ophambili we-tweezers kukubamba, ukusika kunye nokusebenzisa ukutya kwakho. Bayayisebenzisa ukuzikhusela kwizilwanyana ezinamarhamncwa kunye nokwenza amasiko okuthandana ngaphambi kwesi sibini.
Batyekele ekubeni nemikhwa yeshumi, Oko kukuthi, jikeleza emazantsi olwandle apho batya khona, batye baze bavelise kwakhona. Ezinye zezi ntlobo ziye zavelisa enye indlela yobomi ngokwazo kwaye bakhetha ukuchitha ixesha kubunzulu obungaphezulu. Olunye uphawu olubonakala ngoononkala baselwandle kukuba bahlala betshintsha kancinci kuxhomekeke kuhlobo lwabo. Sinomzekelo ocacileyo we unonkala. Xa zidibana neeveki ezithile, zijonga ngaselunxwemeni zitshintshe ikhaka ukuze ziqhelane nobukhulu obutsha.
Unonkala wolwandle unokuziqhelanisa nobomi emhlabeni ukuba uhlala kufutshane nonxweme. Abaqheleki ukuba ngabantu abadadayo kodwa basebenzise imilenze yabo ukuhamba nokuhamba kumgangatho wolwandle. Oku kubizwa ngokuba nemikhwa yeshumi. Kukho ezinye iintlobo zoononkala baselwandle abanjengo Unonkala wekhokhonathi ayikwazi ukuhamba kuphela, kodwa ikwenyuka imithi yesundu ukufumana ukutya kwayo. Oku kubenza babe namandla amakhulu okuziqhelanisa neemeko ezintsha kwaye bakwazi ukuphila kakuhle.
Ukutya kwe-crab yolwandle
Zonke iintlobo zononkala zinendalo ukutya okunomdla ngokupheleleyo. Oko kukuthi, bayakwazi ukusebenzisa naluphi na uhlobo lwezinto eziphilayo, nokuba zilwanyana okanye imifuno. Ukondla zinee-clamp ezinamandla kwaye zezizincedayo ukuba zibambe ukubanjwa kunye nokuphathwa kokutya kwazo. Ezi plisi zibukhali. Inkulu ngakumbi inkala, iya isomelela ngakumbi kwaye ibe nezikhonkwane ezinkulu. Ukongeza, bayakwazi ukusebenzisa amandla ngakumbi ngakumbi njengoko zinkulu iipleyisi.
Ngezixhobo zokusebenzisa ukutya zisetyenziselwa ukusika kunye nokutya ukutya njengeentlanzi ezincinci, ezinye ii-crustaceans, izidalwa ezincinci kunye ne-algae. Ukuze wazi kakuhle ukuba oononkala batya ntoni, kufuneka wazi ukuba uninzi lwezi zilwanyana zingamathuba. Nangona benombala omdaka ekutyeni kwabo, baba ngamaxhoba ezinye izidalwa ezifa okanye zibe nje ngabaqhekezi. Ukuzingela ukutya kwakho okanye ukutya kunokuhlala kunzima ngakumbi kwaye kuyingozi. Oononkala bayazi kakuhle le nto kwaye banqunyelwe ekubeni zizilwanyana ezinamathuba.
Ngamanye amaxesha, unokuzifumana ezi zilwanyana elunxwemeni lolwandle zikhangele nkqu nenkunkuma yabantu. Kukho ezinye oononkala beemarquis ezondla ngokuhluza, oko kukuthi, ukuthatha izondlo kunye nomhlaba kunye namanzi, belahla into abangayifuniyo.
Ezi ntlanzi zifunyanwa phantse kuwo wonke umhlaba. Alukho ulwandle kwiplanethi yonke olungenalo okungenani uhlobo olunye lononkala lolwandle. Nangona bengaphili ixesha elide endaweni enye kuba bathanda ukufuduka, kuzo zonke iilwandle zehlabathi ungabona oononkala.
Bayakwazi ukuziqhelanisa phantse naluphi na uhlobo lwendawo yokuhlala okoko nje behlangabezana nazo zonke iimfuno zayo. Kuba ukutya kwabo kuguquka kangako, abayidingi imeko yokusingqongileyo efanelekileyo kubo. Ukuba iimeko zamkelekile ngokuphakathi, eyona nto iqhelekileyo kukuba unonkala wolwandle uziqhelanise ngokulula.
Ungabafumana ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezintlanu ukusuka elunxwemeni ukuba nje banesibonelelo sokubuya. Benza oku ukuze bafumane ukutya ngendlela efanelekileyo. Kule ndawo Zityisa iintshulube ezincinci, ii-crustaceans, ii-algae ezisele kunye nayo nayiphi na into enokufumaneka kwimingxunya yamatye. Ezi ndawo zihlala zifihliwe ukuze zihlale zikhuselekile kumarhamncwa.
Nangona zikhona phantse kuyo yonke indawo emhlabeni, uninzi lwazo zifumaneka kuLwandlekazi lweAtlantic. Ngaphezulu kwako konke, sinokufumana indawo enkulu yokuhambisa kwiindawo ezishushu apho ubushushu bamanzi bumnandi ngakumbi kubo kuba kuthanda ukwanda kwezondlo. Baza kuba nakho ukuhlala phantse kuyo nayiphi na indalo ebathandayo.
Ukulinda ubomi kwezi zilwanyana kunzima ukufumanisa kuba ineentlobo ezingama-4000. Nangona kunjalo, umndilili oqhelekileyo uphakathi kweminyaka emi-3 neli-15 ubudala. Eli xesha lokuphila lixhomekeke kutshintsho olunokwenzeka kwinani lezilwanyana ezizitshabalalisayo okanye kutshintsho lwendalo. Zihlala zizingelwa kwaye zityiwa zizilwanyana zaselwandle ezinjengee-octopus, ii-turtle zaselwandle, i-dogfish, ookrebe, ii-otters, kunye nezinye oononkala abakhulu.
Xa kukho ukunqongophala kokutya bayakwazi ukutya omnye komnye. Olu tyekelo lwaziwa njenge-cannibalism. Xa bephumela elunxwemeni lolwandle banokuhlangabezana nezinye izoyikiso. Amaqanda okanye imibungu yabo isengozini. Ukuba ziselwandle, izibungu zazo zingatyiwa zezinye izilwanyana kwaye ukuba zisemhlabeni, ziikati kunye nezinja ezondla kuzo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nonkala wolwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Unonkala wolwandle
Olunjani uhlobo oluhle !!!